एक मान्छे बराबर १ करोड ७० लाख झिँगा::Digital News Paper
संसारमा एक जना मान्छे बराबर १ करोड ७० लाख झिँगा छन्। तिनीहरू परागसेचन गर्छन्। कुहिएका चिज र नालीका कीरा खान्छन्। अन्नबाली बिगार्छन्। रोग फैलाउँछन्। माकुरा मार्छन्। र, झ्यालिन्चाको शिकार गर्छन्। यीमध्ये केहीले आफ्नो पखेटा गुमाएका हुन्छन्। त्यस्ता झिँगा चमेराको रगत खाएर जीवित रहन्छन्। उनीहरू चमेराका भुत्लाभित्र फुत्त–फुत्त उफ्रिँदै आफ्नो जीवन काट्छन्। त्यस्ता झिँगाले सामान्यतया एउटा मात्र बच्चा पाउँछ।
‘तिनीहरू जे पनि गर्छन्, जहाँ पनि जान्छन्। भुनभुन कराउँदै उड्छन्। र, प्रशस्त यौनसम्पर्क राख्न रुचाउँछन्,’ लन्डनस्थित नेचुरल हिस्ट्री म्युजियममा झिँगाका संरक्षक एरिका म्याकएलिस्टरले भनिन्, ‘त्यसैले, म झिँगालाई प्रेम गर्छु।’
डा। एरिकाले झिँगाप्रतिको आफ्नो प्रेम ‘दी सिक्रेट लाइफ अफ फ्लाइज’ किताबमा प्रस्तुत गरेकी छन्। यो किताबमा झिँगाप्रति उनको अगाध लगाव ठट्यौली तरिकामा व्याख्या गरिएको छ। यसमा उनले आफूलाई मनपर्ने प्राणीबारे बढीभन्दा बढी सूचना दिने प्रयास गरेकी छन्।
खासगरी १ करोड ७० लाख झिँगाबारे जान्न चाहनेका लागि यो किताब स्रोत–पुस्तक हुनसक्छ। यो तथ्यांक पनि अनुमानित मात्र भएको उनी बताउँछिन्।
झिँगाबारे लेखिएको यो पहिलो किताब होइन। यसअघि पनि झिँगामाथि शोध गरेर थुप्रैले किताब लेखेका छन्। एरिकाजस्तै ती सबै लेखकमा एउटा समानता छ– उनीहरूको झिँगालाई हेर्ने दृष्टि रमाइलो र विनोदपूर्ण छ। उनी मानव जीवन र यो समग्र संसारकै निम्ति झिँगाको महत्व उजागर गर्न चाहन्छिन्। र, भन्छिन्, ‘मान्छेका हातले प्याट्ट हिर्काउन मात्र यो सृष्टिमा झिँगाको जन्म भएको होइन।’
उदाहणका लागि, झिँगाबिना चक्लेटको अस्तित्व नै हुँदैनथ्यो। एरिकालाई चक्लेट मन पर्दैन, तर उनी त्यस्ता झिँगा अत्यन्तै मन पराउँछिन्, जो चक्लेट उत्पादन हुने कोको बिरूवाको परागसेचन गराउन मद्दत गर्छन्। अत्यन्तै सानो आकारका त्यस्ता झिँगा अरू कीराको रगत खाएर बाँच्छन्। सँगसँगै, एउटा बिरुवाबाट अर्कोमा पराग ओसारपसार गर्न खुब मन पराउँछन्।
ढोका अड्काउन प्रयोग गरेको ढुङ्गा उल्कापिण्ड , मूल्य एक करोड बढी
महिलाको ब्रा र पेन्टी चोर्ने यी हुन झापाका युवक
सपनामा किन हुन्छ सेक्स ? यस्ता छन् कारण….
कपाल झर्ने समस्या छ ? कारण यस्तो छ हेर्नुस…